Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 57
Inona no fomba tsara ahafahana mampifandray ireo toe-javatra mitranga sy manonofy mba tsy hisian'ny fifanajana mandritra ny fotoana tsy mahatsiaro ny fandriampahalemana?
Ny foto-kevitr'ity fanadihadiana ity dia iray izay matetika tsy raisina. Ireo izay efa nihevitra azy io dia heverin'ny ankamaroany fa tsy sarobidy. Fa zava-dehibe ny lohahevitra. Na dia tsy azo atao aza ny fotoana tsy ahafantarana ny fifohazana sy ny nofinofy raha toa ka tsy misy afa-tsy olombelona ihany ny olombelona, ​​dia mety hohafohezina izany. Ao anatin'ilay fanjakana mihetsiketsika dia misy olona mahatsapa ny zavatra momba azy, ary amin'ny fomba iray dia mahatsiaro tena izy. Amin'ny toe-javatra manonofy dia eritreretiny amin'ny fomba hafa.
Ny tena lehilahy dia fitsipika miaina, ny fahazavana misaina ao amin'ny vatana. Izy, noho io fitsipika mahazatra io, ny fifandraisana amin'ny fanjakana mitranga dia ny vatan'ny pitipika, izay fery ao anaty karandoha. Ao amin'ny vatana mangatsiaka dia mifandray aminy ny fampahalalam-baovao momba ny tsy fanao an-tsokosoko izay nentina tao amin'ny vatana, toy ny fofona, ny fitsaboana, ny fitiliana, ary ny vokatry ny fandidiana ho mahafinaritra na ny fanaintainana. Ny fahatsapana, amin'ny alalan'ireo rafitra, dia mahatonga ny fitsipiky ny saina hahafantatra ny zavatra eto amin'izao tontolo izao. Ny natiora dia mihatra amin'ny fitsipi-pifehezana avy ao anatiny sy avy any ivelany. Mandritra ny fahamatorana, avy ao anaty amin'ny toetry ny vatan'ny lehilahy; avy any ivelany tsy misy dikany ny fahatsapana fahatsiarovan-tena eto amin'izao tontolo izao. Ny natiora dia mihetsika amin'ny alàlan'ny rafitry ny rafi-pitabatabana, ny foibem-pandraketan-javatra izay ao amin'ny atidoha, dia ny vatan'ny pitipoa. Ny olombelona no mihazona ny vatany amin'ny alàlan'ny rafi-pitabatabana afovoany, ny foibe manara-maso azy koa dia ny vatan'ny pitipoa. Noho izany, ny fitsipika mifantoka dia mifandray amin'ny natiora amin'ny vatan'ny pitipoa, ary maneho hevitra momba ny natiora ary mihazona ny vatany amin'ny alalan'ny vatan'ny pitipika.
Ny vatana pitia dia seza sy ivon-toerana izay ahazoan'ny fitsipi-pandaminana ny fahatsapana avy amin'ny natiora ary avy amin'izany no iantsoana ny fitsipika mifehy, ny fihetsika na fihetsika manohitra ny natiora amin'ny alalan'ny rafi-pitantanana afovoan-tanàna. Ny tebitebin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana mihetsiketsika eo amin'ny vatana mangatsiaka dia manelingelina sy mihazona ny asan'ny tsy fifankahazoana sy ny voajanahary. Ny hazavana mamirapiratra eo amin'ny vatan'ny toeram-piarovana dia mametraka fitarihana amin'ny fiasa voajanaharin'ny vatana ary manakana ny herin'ny hery mamelona ny vatan'ny taova sy ny taova sy ny fiasan'ny vatana. Ny hazavana mamiratra dia mitazona ny vatana manontolo amin'ny tsindrin-tsakafo, ary raha mitohy ny fihenjanana lava dia mety hanaraka ny fahafatesana ny fahafatesana, satria tsy misy ny herin'ny fiainana afaka miditra ao anatin'ny fihenjanana eo ambany fitarihan'ireny ratra ireny. Mba hitazonana ny vatana dia ilaina izany fa ny vatana dia manana fe-potoana rehefa tsy manelingelina azy, ary rehefa afaka mitsahatra sy miverina izy. Noho izany, ny fe-potoana iray atao hoe torimaso dia omena ho an'ny vatana. Ny torimaso dia manome ny fepetra ho an'ny vatana izay ahafahan'ny tafika miditra, manamboatra ary mamelona azy. Ny torimaso dia azo atao raha tsy mitsahatra miparitaka amin'ny vatana mangatsiaka ny hazavan'ny fehezan-tsaina.
Ny fitsipiky ny saina dia ampahany ao an-tsaina; Izany no ampahany amin'ny saina izay mifandray amin'ny vatana. Ny fifandraisana dia natao amin'ny rafi-pitantanana afovoan-tanàna ary voafehy amin'ny vatana mangatsiaka. Ny famokarana dia ny fanjakana vokatry ny fifandraisana eo anelanelan'ny rafi-pitabatabana sy ny rafi-pitia mampihetsi-po amin'ny alàlan'ny foibem-pifandraisana, ny vatan'ny pitipoa. Raha toa ka manjelatra ny hazavany eo amin'ny vatan'ny toeram-pitsaboana io fitsipika io, dia mahatsiaro an'izao tontolo izao. Raha mbola ny fahatsapana dia omena amin'ny fitsipiky ny saina amin'ny alàlan'ny rafitry ny rafi-pitabatabaka, dia mitazona ny hazavana mipetaka eo amin'ny vatan'ny toeram-pitsaboana ny fitsipika mifantoka ary miteraka ny vatana manontolo. Rehefa reraka loatra ny vatany amin'ny harerahana ary voatsimbin'ny hery manan-danja izay tsy afaka mahazo fahatsapana avy amin'ny natiora ka tsy afaka mampita azy ireo any amin'ny vatana mangatsiaka, na dia ny saina aza no mahazo azy ireo. Izany no mahatonga ny reraka ho reraka saingy te-hifoha ny saina. Ny dingana iray hafa dia ny hoe ny toerana misy ny saina dia tsy miraharaha ny fahitana azony avy amin'ny natiora ary vonona ny hisintaka. Amin'ny toe-javatra roa dia miteraka torimaso.
Ny torimaso dia mametraka rehefa ny fifandimbiasana mampifandray ny andian-tsiran-tsolika roa ao amin'ny vatan'ny pitipo dia mihodina ka tapaka ny fifandraisana.
Rehefa tapaka ilay fifandraisana dia ao anatin'ny toetran'ny nofinofy ilay fitsipika mahazatra, na ao amin'ny fanjakana izay tsy misy fahatsiarovana intsony. Ny tranga dia mitranga rehefa marefo ny fitsipiky ny saina, toy ny mahazatra, amin'ny alàlan'ny tsiran-tsainy, mifandray amin'ny atidoha. Raha tsy mitebiteby amin'ireto aviavy ireto ny fitsipiky ny saina dia tsy misy ny nofinofy.
Mandritra ny fotoam-pamokarana, ny fitsipiky ny saina dia eo amin'ny fifandimbiasam-peo, toy ny fifandraisana amin'ny vatan'ny pitipoa. Ity fifandraisana maoderina ity dia ny olona miantso ny fahatsiarovan-tena, fa raha ny marina dia tsy fahatsiarovan-tena izany. Na izany aza, raha mbola mandalo izany, ary raha toa ka mahafantatra ny momba azy ny olona rehetra ao anatin'ny toe-javatra misy azy, dia aoka izy ho antsoina hoe fahatsiarovan-tena noho ny hafanam-po. Izany no fototra ijoroany ao amin'ny toetrany mampihetsi-po. Tsy ho fantany na tsia ny zava-drehetra raha toa ka tsy niasa taminy ny tontolo ivelany ary nanohina azy. Na dia mikorontana amin'ny natiora aza izy dia mahatsapa amin'ny fomba isan-karazany, ary ny totalin'ny fahatsapana mahafinaritra na mampalahelo dia ny antsoiny. Ny sisa tavela amin'ny totalin'ny fahatsapana omen'ny natiora izay lazainy ho azy. Saingy tsy izany mihitsy. Ny tsy fitovian-kevitra rehetra dia manakana azy tsy hahalala na inona na inona. Raha tsy fantany hoe iza izy, ity fanambarana tsotra ity dia tsy hanome fampahalalana marobe amin'ny lehilahy salama, mbola ho sarobidy ihany ny dikany.
Misy, toy ny lehilahy iray matory, ny vanim-potoana maizina eo anelanelan'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny fanjakana mihozongozona sy ny fahatsiarovan-tena ao anatin'ilay nofinofy. Io vanim-potoana maizimaizina io, izay tsy mahatsiaro ny olombelona, ​​dia vokatry ny fiatoana amin'ny fifandraisana rehefa miala ny fifandimbiasana ary ny fahazavan'ny fitsipiky ny saina dia tsy mitsoka intsony eo amin'ny vatan'ny pitipoa.
Ny lehilahy iray tsy mahatsiaro na inona na inona afa-tsy ny fahatsapana voarainy amin'ny fahatsapana ao amin'ny toetran-doha na ny toetran'ny nofy dia mazava ho azy fa tsy mahatsiaro ny tenany, araka ny niantsoana azy, rehefa tsy misy fahatsapana fahatsapana raisina, na amin'ny fifohazana na amin'ny nofy. Ny fahazavana mahatsiaro dia tsy maintsy mahatsapa ny tenany manokana amin'ny fahatsapana amin'ny mamoha na manonofy, mba hahatonga ny olona iray hahatsiaro. Raha tsy mahatsiaro tena ny fahazavany ary ny fanjakana iray dia tsy mitovy amin'ny fantatra amin'ny hoe fanjakana mijoalajoala sy manonofy, dia tsy afaka ny hanana fotoana tsy misy dikany eo amin'ny firenena roa. Na dia tsy mahatsiaro mandrakariva ny olona aza ny olona, ​​dia mety hampihena ny fandehan-javatra mandritra ny fotoana tsy ahafantarany azy, ka mety ho toa tsy misy fiatoana izany.
Alohan'ny hamaliana ny valin'ny fanontaniana dia tsy maintsy takatra ny fisian'ireo zava-misy ireo, na dia tsy azo tanterahina aza ny zava-misy. Raha takatra ireo zava-misy ireo, izay te hahatsiaro mandritra ny vanim-potoana maizimaizina eo anelanelan'ny fifohazana sy ny nofinofy dia hahatakatra fa io fepetra mahonena io dia tsy tokony hiaina amin'ny fotoana fotsiny, raha tsy misy io toe-tsaina mahonena io mandritra ny fotoana fivoahana ary ny toetry ny nofy; Amin'ny teny hafa, ny olona dia tokony ho mihoatra noho ny olona iray izay mahatsapa ny heveriny fa izy, fa raha ny marina dia ny sisa tavela amin'ny totalin'ny fahatsapana izay mahatonga ny eritreritra hamolavola ny sain'ny sainan'ny saina. Tokony ho tsapany fa izy no fahazavana mahatsiaro ny saina, satria tsy mitovy amin'ny fahitan'ny zavatra ny fivadiham-pinoana.